Momba anay - Anping Zhuona Wire Mesh Co., Ltd.
manolo-tena izahay hanome ny sivana mahomby be
AHT / Anping Zhuona Wire Mesh Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina amin'ny famolavolana, fikarohana ary famokarana singa sivana indostrialy sy vokatra sivana. Ny vokatra lehibe dia misy sinter wire Wire, Sintered nahatsapa, singa sivana pleated, singa sivana Sintered, singa sivana wedge, sivana kapila Leaf, sivana Proclean, cartridge sivana, kapila sivana Rimed ary vokatra sivana hafa. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny solika, indostria simika, indostrian'ny pharmaceutika, fibre simika, aerospace ary fiaramanidina, metallurgy, fitsaboana rano, sakafo sy zava-pisotro, indostrian'ny simika arina, ny fanalefahana fiaran'ny fiara sy ny sehatra sy orinasa hafa.
Zhuona dia manana ekipa R&D matihanina, miaraka amin'ny fanavaozana sy ny fampandrosoana, izahay dia manolo-tena hanome ny sivana avo lenta, ny sivana avo lenta ary ny vokatra sivana avo lenta ho an'ny mpanjifanay. Avy amin'ny famolavolana, ny fikarohana ka hatramin'ny famokarana, dia niezaka nanao izay tratry ny herinay izahay mba hahatratrarana ny volavolan'ny tsirairay sy ny mety ho takian'ny mpanjifa, ary hanome ny mpanjifanay vahaolana sivana azo antoka.
Mandritra izany fotoana izany, Zhuona dia manana rafitra fifehezana kalitao hentitra, izay ahafahan'ny orinasanay mitazona toerana voalohany amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny fifaninanana serivisy. Amin'izao fotoana izao, ny orinasanay dia manana fitaovana mandroso volo sinter, milina fantsom-pandrefesana elektronika avo lenta, fitaovana fitiliana marina sy feno, izay afaka mamita tsy miankina ny famolavolana sy ny famokarana fitaovana sivana sy sivana; ary hameno ireo fitaovana sivana isan-karazany sy ny famaritana ny fahadiovan-tsiranoka ary ny fandalinana ny fandotoana; mameno ihany koa ny karazan-tsivana fanatanterahana sivana rehetra, hanomezana antoka azo antoka ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao.
Zhuona dia manana rafitra fanaraha-maso faran'izay tsara, izay ahafahan'ny orinasanay mitazona toerana voalohany amin'ny fifaninanana kalitaon'ny vokatra sy serivisy.
- manolo-tena izahay hanome ny sivana mahomby.
Sivana tsy misy vy, Sivana amin'ny rivotra, Sivana mandeha amin'ny fiara, Filtration amin'ny rivotra tsy miova, Sivan-drano, Sivana entona indostrialy,